Business Development Manager | WEBS College ﻿
6.8.2019, Full time , Education / Training
Company: WEBS College
Our aim is to help students of different backgrounds to buildabetter career and thusabetter Myanmar by nurturing them to become world-class entrepreneurs through our innovative world-class business education.
We support, inspire and help our students achieve their fullest potential and become world-class business leaders and entrepreneurs by providing them with the best-in-class business education.
We are constantly adapting our programmes to reflect the changes in the real business world.
We ensure continuous development of our alumni through our life-long learning programmes and alumni network.
Our products include MBA, UK diplomas and English courses.
Founded by an Open University-educated entrepreneur in 2014, WEBS has attracted and helped thousands of entrepreneurial minds all over Myanmar. The college is famous for its unique approach to teaching business management skills and its real-world outlook. It has established itself as one of Myanmar's fastest growing business institutes.
•	ကျောင်းရှိ ဆရာများထံမှ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ သင်ကြားနည်းစနစ်များကို လက်တွေ့လေ့လာခွင့် ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် master အဆင့် သင်ကြား ရန်ရည်မှန်းချက်ရှိသူများ အတွက် အထူးသင့်တော်ပါတယ်။
•	MBA ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ MBA မဟုတ်သော အခြားသော Business ဘာသာရပ်အထူးပြု သော Master ဘွဲ့ရသူများ လည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။
•	Business Development ပိုင်း အတွေ့ အကြုံ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရှိရမည်။ ( အတွေ့အကြုံ မရှိသေးသော master ပြီးထားသော fresh graduate များလည်းမိမိ ကိုကို မိမိ ယုံကြည်မှု ရှိလျင်လျောက်ထားနိုင်သည်။ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်အတွေ့အကြုံ ရှိမှုကို တန်ဖိုးထားသော်လည်း အလုပ်အတွေအကြုံ မရှိသေးသူများထဲတွင်လည်း စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသူများရှိ သည်ကိုယုံ ကြည်ပါသည်။
•	customer care assistants team တစ်ခုကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။
•	ကျောင်းရှိ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည့် ဆရာများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း, ကျောင်းသား/သူများအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း, စသည့် ကျောင်းတွင်း operations များကို
•	MBA ကျောင်းသားများကို guide သဘောသင်ပြပေး ရမည်။ Guide လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ကျောင်းမှ လိုအပ်သလို train ပေးမည်။ MBA ကျောင်းသားများအား support ပေးရမည်။
•	စာသင်ကြားသော အတွေ့အကြုံ ရှိရန်မလိုပါ။ ( ရှိလျင်ဦးစားပေးမည်။)
•	အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဘာသာရပ်အတော်များများကို (အားလုံးဖြစ်ရန်မလို) မိမိ master လုပ်စဉ်က လေ့လာအောင်မြင်ပြီးဖြစ်ရမည်။ ၎င်း subjects များကို MBA ဆရာများကဲ့သို့ သင်တတ်ရန်မလိုပါ။ ၎င်း ဘာသာရပ်များအား ကျောင်းသားများ နှင့် အတူတကွ ဝင်ရောက်၍ သင်ယူလေ့လာရမည်ဖြစ်ပြီး ဝါရင့်ပညာရှင် MBA ဆရာများက အပတ်စဉ်သင်ကြားထားသည်များကို MBA ကျောင်းသားများအား Guide သဘော ပြန်သင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ Accounting & Finance ပိုင်း subject များ အထူးပြု ကျွမ်းကျင်မှု ရှိရန်မလို။ ဘာသာရပ်တစ်ခုခုကို အထူးပြု ကျွမ်းကျင်ရန်မလို။
2) Entrepreneurship & Creativity
5) Marketing Management
7) Strategic Management
8) Managerial Economics
•	MBA ဆရာများအား ကောင်းစွာ လိုအပ်သော academic support ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
•	Sales & Marketing အတွေ့အကြုံ ရှိရန် မလိုသော်လည်း ရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
•	English စာ advanced level ရှိရမည်။ (လုပ်ငန်းခွင်တွင် သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လက်မှတ်ပြနိုင်ရုံမဟုတ် အမှန်တကယ် တတ်မြောက်ရမည်)
•	မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းမှန်အောင် ရေးနိုင်ရမည်။
•	Computer သုံးနိုင်၍ Microsoft office ကိုကျွမ်းကျင်ရမည်။ (Words, Excel, Powerpoint) (သင်တန်းအောင်လက်မှတ်သာရှိ၍ လက်တွေ့ အသုံးမချနိုင်သူမဖြစ်စေရ)
•	မြန်မာ အင်္ဂလိပ် စာရိုက်နိုင်ရမည်။
•	Email, Internet ကောင်းစွာသုံးနိုင်ရမည်။
•	Internet ကိုအသုံးပြု ၍ အချက်အအလက်များကို အင်္ဂလိပ်လိုရှာဖွေနိုင်ရမည်။
•	Internet နှင့် computer ကို နေ့စဉ်ဘဝတွင် အမြဲထိတွေ သုံးစွဲနေသူဖြစ်ရမည်။
•	Facebook သုံး၍ customer care ပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	MBA ကျောင်းသားများအတွက် study tour များကို စီမံဆောင်ရွှက်ပေးရမည်။
•	ဘွဲ့နှင်းသဘင်ပွဲများ နှင့် အခြားသောပွဲများကို စီမံဆောင်ရွှက် နိုင်ရမည်။
•	မိမိမလုပ်ဖူးသော အရာများအားဖြစ်မြောက် အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင် စွမ်းရှိရမည်။
•	Business Development Manager ဟုသတ်မှတ်ထားသော်လည်း တစ်ခြားသော သင့်တော်သည့် အလုပ်များလဲ လိုအပ်လျင်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
•	အစမ်းခန့် (၃) လ ရှိမည်။
•	bond (1) နှစ် နှင့် (3) လ ရှိမည်။
•	ရည်ရှည်လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန် ဟူသော ရည်ရွှယ်ချက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	လစာ နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်
•	အခြေခံလစာအား ညှိုနှိုင်းမည်ဖြစ်သည်။
•	Very attractive incentive system စွမ်းဆောင်ရည်ပေါ်မူတည်၍ လစဉ် incentive bonus 500,000 မှ စ၍ (no upper limit) အကန့်အသတ်မရှိ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး interview အဆင့်ရောက်လျှင် ရှင်းပြမည်ဖြစ်သည်။
•	အလုပ်ရှင်သည် အမှန်တစ်ကယ်စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းသူအား ထိုက်တန်စွာ ချီးမြှောက်ခြင်းအား ယုံကြည်လက်ခံ ထားသူဖြစ်ပြီး win-win policy
•	ကျောင်းရှိ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ, IQN UK single subject business diploma အတန်းများကို လုပ်သက် (၆) လပြည့်လျှင်အခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့် ရှိသည်။
•	လုပ်သက် (၂) နှစ်ပြည့်လျင် WEBS ရှိ MBA သင်တန်းကြေး ၏ 75% အားကျောင်းမှ စိုက်ထုတ်ပေးမည်။
•	Bond (2) နှစ် နှင့် (3) လ ထိုးလျင် WEBS ရှိ MBA အား သင်တန်းကြေး 100% အားကျောင်းမှ စိုက်ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည့်အပြင် MBA ကို ချက်ချင်းပင်
•	MBA နှင့် အခြားသော course များ free ပေးတက် သည့်အတွက် လုပ်ခအား နှိမ်ပေးခြင်း ပြု မည်မဟုတ်။
•	အလုပ်သမားဥပဒေ နှင့်အညီ ခွင့်ခံစားခွင့်ရှိမည်။
Work location No.21/23 (E4), Hledan Road, The street next to J'Donts, Hledan, Yangon
100 Days, Full time , Education / Training
•	customer care assistant ဟုသတ်မှတ်ထားသော် လည်း အခြားသော သင့်လျော်သည့် အလုပ်များလဲ လိုအပ်လျင်လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Our vision -------------- Our aim is to help students of different backgrounds to buildabetter career and thusabetter Myanmar by nurturing them to become world-class entrepreneurs through our innovative world-class business education. Our mission ------------------- We support, inspire and help our students achieve their fullest potential and become world-class business leaders and entrepreneurs by providing them with the best-in-class business education. We are constantly adapting our programmes to reflect the changes in the real business world. We ensure continuous development of our alumni through our life-long learning programmes and alumni network. Our products ----------------- Our products include MBA, UK diplomas and English courses.
A brief story ------------------- Founded by an Open University-educated entrepreneur in 2014, WEBS has attracted and helped thousands of entrepreneurial minds all over Myanmar. The college is famous for its unique approach to teaching business management skills and its real-world outlook. It has established itself as one of Myanmar's fastest growing business institutes.
•	Developing and executingacomprehensive marketing plan meeting and/or exceeding sales lead targets within the set marketing budget •	Working with outside agencies and freelancers regarding the design and development of marketing collateral (both printed and on screen) and events •	Planning and implementing effective campaigns (online and off-line), events and media planning •	Setting up and running effective competitors and market intelligence system to guarantee in-depth environmental analysis •	Buildingastrong and positive ...
•	General English နှင့် Academic English ကိုသင်ကြားနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
•	small customer care assistants team တစ်ခုကို ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမည်။ •	ကျောင်းရှိ လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည့် ဆရာများနှင့် ဆက်ဆံခြင်း, ကျောင်းသား/သူများအား ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်း, စသည့် ကျောင်းတွင်း operations များကို ချေ� ...
Business Development Manager Business Management Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon WEBS College Business Management Jobs Business Management Jobs Education/Training Jobs in Myanmar, jobs in Yangon